Aya ndiwo marobhoti anotarisa yako Apple Watch | Ndinobva mac
Isu tinopedzisa zuva nechishongedzo chako Apple Watch izvo, kure nekuva chishongedzo chekuitakura ichienderera ichiiswa, ndinoiona seyakanaka kune akakosha uye akasarudzika mamiriro iwe unoda kuchengetedza yako Apple Watch chero kwauri.
Kana rimwe zuva iwe uchida kuenda kumakomo kana bhasikoro neako Apple Watch uye iwe usingade kurohwa nekushaya hanya, unogona kusarudza iyo pfungwa ye bumper. Yatove neiyo iPhone 4 Apple yakagadzira iyi pfungwa uye ikozvino uyu mugadziri afunga nezve chimwe chinhu chakafanana.
Kune zvakawanda zvekudzivirira zvekushandisa zvakafanana neaya atino tarisa mune ino chinyorwa asi mashoma andaona aine dhizaini uye mavara seizvi uye Apple Watch chimwe chinhu chinopfuura kungoda kuziva kunyange hazvo chakanyanya kukura. Sezvauri kuona ichi chivharo che Vhura rabha pachikamu chechidzitiro uye pane chikamu chemaseru kumashure pamwe nenzvimbo yekorona.
Kuisirwa kwayo kuri nyore uye ndeyekuti sesirubhi sock isu tinofanirwa chete kuwana muviri weApple Watch mukati. Mutengo wacho hauna kunyanya kukwirira uye ndezve izvo chete 4,91 euros iwe unogona kuve nechero mashanu mashanu aripo musanganiswa wemara.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve ichi chinongedzo, unogona kushanyira chinotevera chinongedzo. Icho chisarudzo chakanaka kuchengetedza yako Apple Watch mumamiriro ezvinhu akaipisisa mune vamwe vadziviriri vanokundikana kudzivirira nenzira iyi nekuti vakaomarara kana nekuti havafukidze nenzira iyo ino yatinopa nhasi inovhara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Izvi ndozvinoita mabumpers anotaridzika seako Apple Watch
Vlvaro Augusto Casas Vallés akadaro
iwo "mapundu", ndiani anoziva izvo izvo, asi zvinotaridzika zvakashata, kwete, zvinotevera 🙁
Pindura kuna vlvaro Augusto Casas Vallés
Chii chisina maturo pamusoro pemabumpers kana kuti iyo Watch yaizowira pasi, kana icho chakakosha chinhu uye chii chimwe chinofanirwa kuchengetedza iyo skrini ndiyo iyo yakamenywa uye inotora zvibhakera.